PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Basola isibhedlela ngobudedengu ngophuhluka izibungu
Basola isibhedlela ngobudedengu ngophuhluka izibungu
Isolezwe - 2018-04-16 - IZINDABA - LUNGI LANGA
BASOLA isibhedlela sasePhoenix, iMahatma Gandhi ngobudedengu abazali bengane (6) yakwaBester, ephethuke izibungu emthungweni osonyaweni.
Unina kaRefilwe Biyela, uNksz Silindile Biyela uthe namanje akakholwa ukuthi isibhedlela sisivumele kanjani isimo esiholele ekutheni indodakazi yakhe igcine seyiphuma izibungu onyaweni ilaliswe esibhedlela.
Le ntomabazanyane ilaliswe esibhedlela saseThekwini, i-Addington ngemuva kokuthi ibe nenkinga yokubhudluka komthungo obusuphuma nezibungu.
UNksz Biyela uthe indodakazi yakhe ilimale engozini yemoto ngo-Ephreli 1, ihamba noyise wayo omncane bephuma esontweni.
Uthe wathola ucingo ntambama lumbikela ukuthi ingane iphuthunyiswe emtholampilo waseNewtown A, eNanda, ngoba ilimele kanzinyana. Uthe ngesikhathi esefikile emtholampilo ufike wasibona isimo ukuthi asisihle kodwa wazinika ithemba lokuthi uma esethungiwe inxeba uzosheshe alulame.
Uthe emtholampilo bamtisha base bemdlulisela esibhedlela iMahatma Gandhi nokuyilapho okwakulindeleke ukuthi athathwe isithombe ukuze kuvele ukuthi ulimele kangakanani. Wadluliselwa kulesi sibhedlela wahlala isonto. NgoLwesihlanu kuvele ukuthi umthungo wakhe unenkinga. Ngenxa yokungatholakali kweambulensi eyayingamphuthumisa waze wahanjiswa ngakusasa.
“Okusiphatha kabi ukuthi ngesikhathi engakahambi eMahatma Gandhi zase zivelile izibungu futhi abahlengikazi sebezibonile. Uyise womntwana wabuza umhlengikazi ngokwenza kuvele izibungu kodwa wamtshela ukuthi kulindelekile njengoba besebenzisa into efana nezinkambi zetiye ukumoma udoti. Namanje simangele ukuthi bamhambisa kanjani bengasamhlolanga. E-Addington odokotela bafike basibikela ukuthi ukonakala komthungo wakhe kudalwe ukunganakekelwa kwawo ngendlela nobudedengu,” kusho uNksz Biyela.
Uthe ngendlela izibungu ebese ziningi ngayo onyaweni lwengane yakhe bese izisusa yona uma izibona.
UNksz Biyela uthe bafisa kuxoxiswane nabasebenzi bakulesiya sibhedlela njengoba ethe ababanakekeli ngendlela abantu futhi abanaki. Uthe umonakalo owakhiwe ukunganakwa komthungo sekuphoqe ukuthi ingane yakhe ihlale isikhathi esengeziwe esibhedlela. Phezu kwalokhu abazi noma unyawo lwakhe luyobuyela yini esimeni.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNksz Ncumisa Mafunda, uthe yize bekhathazekile ngezinsolo ezibekwayo, abakwazi ukukhuluma izindaba ezithinta ukunakekelwa kweziguli nomunye umuntu okubalwa kubo abezindaba.
“Umnyango sewucele umbiko esibhedlela ukuze uthole ngokunakekelwa kwaso bese kucutshungulwa ngaphakathi, ngaphandle kokudalula isiguli.”